Amadili we-TOP wesonto ku-Amazon - Juni 2017 | Izindaba zamagajethi
Amadili we-TOP wesonto ku-Amazon - Juni 2017
Sikhona geeks, sithanda ubuchwepheshe ngakho-ke i-electronics yabathengi. Kungakho ngaso sonke isikhathi sihlala siqaphile nganoma yiluphi uhlobo lokunikezwa kwenzalo olungavela mihla namalanga. Kodwa-ke, sibe nombono ongcono kakhulu, sizokulethela okunikezwayo kwamasonto onke okungafanele ukuphuthe, ngoba uzoba nokuqukethwe okuhle kakhulu kwe-elekthronikhi kanye namagajethi ngamanani angenakuhlulwa.
Ukuze, hlala nathi futhi uthole ukuthi iziphi izipesheli ezithakazelisa kakhulu zesonto eledlule likaJuni (kusuka ngoJuni 26 kuya kuJulayi 3) futhi uthathe ithuba lokushintsha ithelevishini, uthole ifoni entsha ...
Lokhu okuthunyelwe kuzobuyekezwa njalo usuku nosuku, ngakho-ke sincoma ukuthi ubuye uzohlola ukuthi yini okunikezwayo okusha kosuku okukhulunywa ngalo.
1 Iziphesheli ze-Amazon (Juni 26-Julayi 3)
2 Ama-euro ayisihlanu eSipho e-Amazon ethenga izaphulelo zezipho
Iziphesheli ze-Amazon (Juni 26-Julayi 3)
Thola izipho ezinenani elingu- € 150 ngokuthenga imikhiqizo yeCanon efakwe kulokhu kukhetha: LINK
Umabonakude we-LG 49 inch (4K, IPS) nge- € 766 nge ukuthumela ngosuku olulodwa
IMotorla moto g4 plusUhlobo olukhethekile lwe-Amazon nge- € 179,99 nje (intengo endala € 199,99, ukunikezwa kusebenza kuze kube nguJuni 27).
I-JVC HA-EBTS Ama-headphone asezindlebeni kusuka ku- € 29,90, isaphulelo esingu-38% ngentengo ejwayelekile ngoJuni 26.
32 intshi LG Gaming Monitor kusuka ku- € 368,18, ngesaphulelo se-18% kuze kube nguJulayi 2
Ayikho imikhiqizo etholakele. ngo- € 21,99 kuphela, ukwehla kwentengo kuka-45% kuze kube nguJuni 26
Ama-euro ayisihlanu eSipho e-Amazon ethenga izaphulelo zezipho
Ukunikezwa okuhle kwe-Amazon kubuyile lapho sizothola khona i- € 5 njengesipho lapho sithenga okungenani ama- € 25 emasheke izipho. Ungaya ukuthola amakhadi akho ezipho kokulandelayo LINK. Khumbula ukuthi lokhu kunikezwa kuzotholakala kuze kube nguJuni 30, ngakho-ke ngeke ube nezinsuku eziningi ukusizakala. Kuyinto enhle futhi ingenye yokulindelwa kakhulu ngamakhasimende ajwayelekile e-Amazon.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Amadili we-TOP wesonto ku-Amazon - Juni 2017
U-Araceli Guardia kusho
Wow, leyo LG engama-intshi angama-49 izoba ngeyami! Ngiyayithanda indlela isinqumo se-4K esibukeka ngayo kakhulu kuphaneli ye-IPS
Phendula u-Araceli Guardia
kuhle kangakanani woooo bayangimangaza
Amafoni e-Flip ayaphila kunanini ngaphambili
Kudalulwe imininingwane yokuqala ye-Samsung Galaxy Note 8